अपहरण काण्डमा मन्त्रीका पिए देखी पत्रकारसम्म प्रहरीको खोजीमा भद्रपुर, बैशाख ११ ।
झापाको चर्चित अपहरण काण्डमा मन्त्रीका सहयोगी र पत्रकारसम्मको संलग्नता देखीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जानकारी दिएको छ । बिर्तामोडका जीवन बिष्ट अपहरण काण्डका बारेमा पहिलो पटक सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिंदै आज प्रहरी प्रमुख शैलेश थापाले घट्नामा संलग्न केही ब्यक्तिलाई प्रक्राउ गरिएको जानकारी दिनु भयो । प्रहरीका अनुसार घट्नामा संलग्न देखिएका साबिक बाहुनडाँगी २ हाल मेचीनगर ४ का भुपु कान्छ भनिने अजय राई र भद्रपुर वाड नं. ७ का तेजिन्द्र न्यौपानेलाई चैत २७ गते पक्राउ गरिको थियो । त्यस्तै भद्रपुर वडा नं. ६ का प्रेम न्यौपानेलाई चैत २८ गते र साबिक बाहुनडाँगी २ हाल मेचीनगर ४ का राजु कुवँरलाई चैत ३० गते पक्राउ गरिएको थियो ।
प्रहरी प्रमुखले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार घट्नाका मुख्य योजनाकारका रुपमा पत्रकार पुजन घिमिरे रहेका छन । हाल फरार रहेका पुजन घिमिरे र बिर्तामोडका ओम शिवाकोटीको योजनामा जीवन बिष्ट अपहरण काण्ड रचिएको प्रहरी प्रमुख थापाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनु भयो । घट्नामा दोषी देखीएका केही ब्यक्ति पक्राउ परे पनि कही भने फरार रहेको र खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरी प्रमुख थापाले बताउनु भयो ।
खोजीको सुचीमा रहेका मुख्य अभियुक्तहरुमा ईलाम श्रीअन्तु वडा नं १ घर भई बिर्तामोडमा बसोबास गर्ने पुजन घिमिरे, अर्जुनधारा वार्ड नं. १ का शभ्भु दाहाल, बिर्तामोड ५ का अग्नी भनिने राजु आचार्य, भद्रपुर २ का लक्ष्मण बस्नेत र बिर्तामोड ६का ओम शिवाकोटी रहेका छन । घटना अनुसार बिर्तामोड भद्रपुर रोड स्थीत करीब १५ करोड मुल्य पर्ने जीवन बिष्टको नाममा रहेको जग्गा किर्ते कागजात बनाई नामसारी गरेको र जग्गा धनी जीवन बिष्टलाई अपहरण गरी बन्धक बनाईएको थियो । प्रहरीले मुख्य फरार अभियुक्त भनिएका पुजन घिमिरे सगरमाथा टेलिभिजनका झापा सम्बाददाता हुन त्यस्तै सभ्भु दाहाल पनि झापामा पत्रकारीता गरिरहेका ब्यक्ति हुन र अग्नी भनिने राजु आचार्य बहालवाला सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री सुरेन्द कार्कीका निजी सहयोगी तथा नेकपा माओबादी केन्द्र झापाका नेता हुन । यसमा तपाईको मत